မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး မြန်မာဘာသာထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ File Sharing Site မှာ အခုပဲ အကောင့် လုပ်လိုက်ရအောင် !! - အမျိုးကောင်းသား
Home » IT News » မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး မြန်မာဘာသာထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ File Sharing Site မှာ အခုပဲ အကောင့် လုပ်လိုက်ရအောင် !!
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး မြန်မာဘာသာထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ File Sharing Site မှာ အခုပဲ အကောင့် လုပ်လိုက်ရအောင် !!
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခဗျာ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး မြန်မာ ဘာသာ စကား ထောက်ပံ့ ပေးတဲ့ File Hosting Website - File Bullet ဟာ Beta Version နဲ့ ထုတ်လွှင့်ထား ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ခဗျာ...
FileBullet Website ကို အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် မြန်မာစာ စနစ်ထောက်ပံ့ ပေးထားပြီး Free User သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး Premium User အဖြစ်လည်း Upgrade ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ File Bullet - File Sharing Website နဲ့ ပတ်သက်လို့ အောက်မှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ခဗျာ...
What is File Bullet ?
-File Bullet ဆိုတာ Miloboy Inc., ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး မြန်မာဘာသာစကား ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ File Sharing Website ဖြစ်ပါတယ်။ File Bullet ဟာ Beta Version အဖြစ် ထုတ်လွှင်ထားသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မကြာမီ Domain ပြောင်းလဲ ဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Why We Should Choose File Bullet ?
-File Bullet ကို ဘာကြောင့် ရွေးသင့်သလဲ ဆိုရင် File Bullet မှာ File Sharing ပြုလုပ်မည့်သူတွေ အတွက် လိုအပ်မဲ့ အရာ အားလုံးကို ထောက်ပံ့ ပေးထားလို့ ပါပဲ။ Remote URL Upload, Protect By Password, Send Uploaded Files to My Email, View Statistics, HTML code စသည်ဖြင့် လိုအပ်မဲ့ အရာတွေ အားလုံးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ထို့ အပြင် Premium Member များ အတွက်လဲ Direct Download, No Waiting Time, No Advertisement, No Download Limit Feature များကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ အပြင် အလန်းဆုံး Feature ကတော့ Premium Member တွေ အားလုံးကို Torrent ကနေ မိမိ လိုအပ်တာကို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Service ပါ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ အပြင် Server ရဲ့ Location ဟာ Copyright တွေ ကင်းလွှတ်တဲ့ နေရာမှာ ထားထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် သင် ဘာပဲ တင်တင် စိတ်ပူစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။
File Server ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ 100MB Port ကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့် အနေနဲ့ Download Speed 12MB/s အထိ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ Download Speed ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိ ရဲ့ Download Speed ကနေ မိမိရဲ့ Location နဲ့ မိမိရဲ့ ISP ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး Premium Feature ကို အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင် Torrent ကနေ Download လုပ်မဲ့ Download Link များကို မိမိနှစ်သက်ရာ File Host ကနေ Request ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အကောင်းဆုံး Feature ကတော့ မိမိနှစ်သက်ရာကို စိတ်ကြိုက် Request ပို့ပြီး တောင်ဆို နိုင်ခြင်းပါပဲ။ ဒါကလဲ ဘယ်မှာ မှ မရနိုင်တဲ့ Support ပါပဲ။ အားလုံးကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း တောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
FileBullet ကနေ ရရှိနိုင်မဲ့ Feature တွေကတော့
Free User များ အတွက်
- 20 MB အထိ Upload ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- URL ကနေ တစ်ဆင့် Direct Upload ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- Upload ပြုလုပ်ပြီးပါက Email ထံသို့ တန်းပို့ပေးခြင်း၊
- Download Link များကို Password ခံနိုင်ခြင်း၊
- File Information များကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
- File Info မှ တစ်ဆင့် Website, Facebook, Twitter, Mail သို့ စသည့် Sharing Service 50 ကျော်ကို တန်းပြီး မျှဝေနိုင်ခြင်း၊
- မိမိ Upload တင်ထားသော File ၏ Statistics များကို အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင် ခြင်း၊
- ၂၄ နာရီ Support ရှိခြင်း၊
Premium User များ အတွက်
-2GB အထိ Upload ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- URL ကနေ လျှင်မြန်စွာ Direct Upload ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- Upload ပြုလုပ်ပြီးပါက Email ထံသို့ ဒါရိုက်ပို့နိုင်ခြင်း၊ Password ခံနိုင်ခြင်း၊
- File Information ကို အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ရုံသာ မက လွယ်ကူစွာ မျှဝေနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားခြင်း၊
- မိမိ Upload လုပ်ထားသော File ၏ အချိန်နှင့်အလိုက် ကြည့်ရှုနှုန်း၊ လာရောက် ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်သွားသော နိုင်ငံ၊ Download Link ကို Refer လုပ်ပေး သော Site များ၊ အသုံးပြုထားသော Browser များ၊ File ကို လာရောက်ကြည့်ရှုစဉ် အသုံးပြုထားသော Operating System စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ကြည့်ရှု နိုင်ခြင်း၊ တို့ အပြင်
- Download ပြုလုပ်ရာတွင် Loading စောင့်စရာ မလိုအပ်ပဲ... Direct Download ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- Server Busy နေချိန်တွင်ပင် လိုင်းကောင်းကောင်းနှင့် Download ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားခြင်း၊
- ထို့အပြင် မည်သည့် နေရာကမှ အလွယ်တကူ မရရှိနိုင်သော Torrent Download Service ကို ရရှိနိုင်ခြင်း၊
- ၂၄ နာရီ Support ရှိပြီး အချက်အခဲ များကို အကူအညီတောင်းနိုင်ခြင်း။
အသုံးပြုသူအားလုံး အတွက် သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်း
မှန်ပါတယ်။ သင့်တင့်သောထက် အလွန်ချိုသာသောလို့ ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ 30 Days Premium Account အတွက် မြန်မာငွေ 3000 ကျပ် သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း ဈေးနှုန်းဟာ ၂ရက်စာ မုန့်ဖိုး၊
တစ်ရက်စာ ဘီယာဖိုးလောက်သာ ရှိပါတယ်။
Payment များကို တော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဆိုရင် MyanPay ကနေ တစ်ဆင့် ပေးချေနိုင်ပြီးတော့
Foreign ကနေ ဆိုရင်တော့ PayPal ကနေတစ်ဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။ PayPal ကိုသုံးပြီး တစ်ဆင့် Upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ FullPremiumNowFree@gmail.com ကို အကြောင်းကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ ငွေလွဲရမဲ့ လိပ်စာနှင့် တကွ အကြောင်းကြားပေးဖို့လိုပါတယ်။
PayPal ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လကို $3 ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MyanPay ကနေ ငွေပေးချေ ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်မှာ သွားရောက်ပြီး အောက်ပါပုံလေးက Buy Now ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေလိုက်ရုံပါပဲ။ MyanPay ကယူတဲ့ Extra Service ခ အနည်းငယ်တော့ ရှိပါလိမ့်မယ်။ PayPal နဲ့ ဆိုရင်တော့ ငွေ သက်သာပါ့မယ်။
ဈေးနှုန်းကလည်း ချိုသလို မိမိလိုအပ်မဲ့ Service အားလုံးကိုလဲ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ အတွက် File Sharing ပြုလုပ်မဲ့ သူတွေ အတွက် အရမ်းကို သင့်တော် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အခုပဲသွားပြီး
အခုပဲ သွားပြီး အကောင့် လုပ်လိုက်ကြရအောင်လို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
အောက်ပါလင့်မှာ Register ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် >> http://www.filebullet.tk/
Information From Miloboy Inc.,
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 11:54:00 PM
La Minn October 23, 2013 at 2:33 AM
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ခုပဲ Register လုပ်လိုက်ပါပြီ